Musiibada Tareenka ee Magaalada Çorlu: Tikidhada 360 Waxaa Lagu Iibiyey Tareenka 563 | RayHaber | raillynews
HometareenkaNidaamka Isgaadhsiinta ee IntercityMusiibada Mustaqbalka ee Cawska: 360 Ticket lagu iibiyo Tilmaamaha Shakhsiyaadka 563
Musiibada Mustaqbalka ee Cawska: 360 Ticket lagu iibiyo Tilmaamaha Shakhsiyaadka 563
25 / 07 / 2018 Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, tareenka, GUUD, TURKEY
Faahfaahin cusub ayaa ka soo baxday shil tareen oo ay 24 ku dhinteen naftooda ku yaalley Tekirdaak ama Cole. Waxay u muuqatay in tigidhka 360 ee tareenka ku yaala 563 la iibiyey. Wasaaraddu waxay sheegtay in ka dib markii shilku dhacay in rakaabkii 362 ay ahaayeen shaqaalaha 6.
Waxaa la ogaaday in dadka 24 la dilay iyo dadka 341 ku dhaawacmeen lamadegaanka, waxaa jiray rakaab ka badan tirada kuraasta tareenka.
563 BALLET SOLD
Sida laga soo xigtay wargeyska wararka ee Saymazâ s oo ka socda Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha ka dib shilka kadib UzunköprÃ¼-Halkalı tareenka 6, rakaabka 362 iyo shaqaalaha 6 ayaa ku sugnaa tareenka. Sida laga soo xigtay warbixintii shilka ee hal maalin ka dib, waxaa lagu nuuxnuuxsaday in gaadhiga uu yahay shakhsiyaadka 60. Tikidka 360 waxaa loo iibiyay tareenka 563, tikidhka 393 waxaa baari jiray kormeeraha ka hor inta uusan imaanin Muratli, shaqaaluhu waxay geleen daqiiqado 22 ka hor musiibada. Xogta ku saabsan joogitaanka rakaabka ayaa sidoo kale la sharaxay.
Waxaa lagu sheegay warbixinta in tareenku ka tagay Muratli at 17.12 oo lagu daawaday xawaaraha 90-110 km: Waxaa jira tiro ka badan hal qof oo rakaab ah oo tareenka ka socda 16.52. Maadaama ay 16.50 tahay dhammaadka wiigga iyo dadkuna ay badan yihiin, saldhigga ayaa ka badan sidii caadiga ahayd si loo hubiyo in rakaabku si nabadgelyo ah uga baxaan saldhigyada iyo joojinta. waxaana la go'aamiyay in nidaamka la geliyey nidaamka.
Sida laga soo xigtay xogta ay bixisay sarkaalka TCDD ee Hurriyet, waxaa jirey rakaab ku socday tareenka meel u dhow 450 qaarna waxay joogeen tareenka. Tan iyo markii kuraasta la tiriyay iyo tikidhada aan laga jarin idaacadaha, kiciyayaashu waxay iibiyeen tikidhada tareenka.
Isha: www.hurriyet.com.tr goobta
'Musiibadii Tareenka Tareenka ee' Qalabka Tareenka ee 'luorlu'da!
Ma rabtaa in aad aragto tareenka xawaaraha sare ee gudaha 360 heerka muuqaalka guud?
Abaalmarinta 360 Xeer - Abaalmarin weyn oo loogu talagalay OPET
Ogeysiinta Qandaraaska: Gudbinta khadka Ulukışla Boğazköprü KM: 58 + 360
Mushaarooyinka Tababaridda Dardargelinta
Uzunköprü Halkalı duulaan
Lacagta Garoomada Sannadleed ee Sannadlaha ah ayaa la shaaciyey
Heshiiska Shaqaalaynta Wadajirka ah waxaa saxiixay MOTAŞ iyo Xuquuqda Shaqada